पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्वोच्चले झिकायो | Ekhabar Nepal
पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र सर्वोच्चले झिकायो
समाज पौष २६ २०७४ .
काठमाडौं,पुस २६ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका दुबै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका डा. गोविन्द केसीले वयानका क्रममा पराजुलीको दुईवटा नागरिकता रहेका र एसएलसी पास भए/नभएको शंका भएको बताएका थिए । डा. केसीले इजलासमा उपस्थित भएर पनि त्यही अडान राखे ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका नाममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुबै नागरिकताको प्रतिलिपि र न्याय परिषदबाट उमेरबारे भएको निर्णय एवं शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन आदेश दिएको हो ।
साथै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको इजलासले आईओएमको डीनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेशको मिासिल पनि झिकाउन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
के हो पराजुलीको नागरिकता विवाद
प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै पराजुली नागरिकतामा उमेर सच्याएको विवादमा परेका थिए । उनको पहिलो नागरिकता र ३४ वर्षपछि लिएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति फरक परेको विवाद यसअघि नै बाहिर आएको थियो ।
प्रधानन्ययाधीश पराजुलीले ०४८ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकतामा जन्म मिति २१ साउन २००९ छ । तर, २५ माघ २०३४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निकालेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा भने जन्म मिति १६ वैशाख २०१० उल्लेख छ ।
उमेर विवाद देखिएपछि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ कायम गरेकी थिइन् । त्यस अनुसार पराजुली गत साउन २१ मै सेवानिवृत्त हुन्थे ।
तर, सर्वोच्चले उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रविक्रम बस्नेतको उमेरमा कार्कीको निर्णय उल्टायो । र, त्यही नजिरमा टेकेर न्यायपरिषदले पराजुलीको पनि पुरानै जन्ममितिलाई सदर गर्‍यो, जसले गर्दा पराजुलीलाई ११ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो । अन्यथा उनको कार्यकाल ५८ दिनको मात्रै हुने थियो ।
अहिले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै अनसन बसेका डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा लागेपछि उनको उमेर विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । र, सर्वोच्चले त्यही डकुमेन्टलाई फेरि झिकाएर हेर्ने भएको छ ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने पहिलेको नागरिकतामा मिति उल्लेख गर्ने चलन नभई नागरिकता लिएको साल र व्यक्तिको उमेर ‘वर्ष’ मात्रै लेख्ने चलन रहेको र पछि मिति कायम गरिएको हुनाले त्यसमा कुनै गडबडी नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो सबै चिज खुल्ला र पारदर्शी रहेको बताउँदै आएका छन् ।